Tranny လိင်ဂိမ်းများ:Shemale ညမ်းဂိမ်းများယခု
လာစူးစမ်း Tranny လိင်ဂိမ်းများ!
လူတိုင်းသိတယ်အကြောင်းဂိမ်းများများမှာကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်လျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေနေတယ်တင်းဂိမ်းများ၊သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်စရာများမယုံနိုင်လောက်အောင်။ ခဏတာလုံးဝသေချာမအဘယ်ကြောင့်နာမည်ကြီးမားခဲ့ပါတယ်ကြပြီမဟုတ်နှုတ်ဤအမျိုးအစားများ၏ခေါင်းစဉ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြောင့်အပေါ်သို့ကျရောက်ပြီးတက်ခူးဖို့အလျှော့! အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြေညာဖို့နှစ်သက်တဲ့မှတံခါးများကိုဖွင့်လှစ် Tranny လိင်ဂိမ်းများတရားဝင်! ဒါဟာလာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်း၊ဒါပေမယ့်ပြီးနောက်ပုဂ္ဂလိက beta ကိုစမ်းသပ်တွက်ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀၊ကအကြောင်းခဲ့သည်မင်းအတွက်အချိန်ခွင့်ပြုဖို့လူတိုင်းအရေးယူအပေါ်ရ။, မှတ်ချက်ကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့ကဒီမှာအလုပ်လုပ်နေအပေါ်စီမံကိန်းသြဂုတ်လကတည်းက၏၂၀၁၇၊ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဟာသုံးနှစ်အတူတူထားရန်အတော်လေးအကျွန်းစု smutty။ အိုး၊ရင်ကြပြီမဟုတ်သေးတယ်မှထွက်ခေါင်းစဉ်:အရာအားလုံးရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အတွင်း Tranny လိင်ဂိမ်းများသည်ပတ်ပတ်လည်အခြေ shemales၊ထောင်ချောက်၊femboys။ ဆိုရင်ဒါဟာလညျးပါဝငျငယ်နှင့်အတူဗဟို–အကြင်ဖစ္ႏိုသည်–သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အတွင်းအပြင်! ယခုတော့:စေမယ့်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြ၏သီလကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းငယ်စီမံကိန်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်ရောက်ချင်တဲ့ပေလိမ့်မည်ပေါ်သာ။ တခါတရံမှာ၊ထိုသို့အနည်းငယ်ချိုမြိန်အပြောစကားအရရှေးရှေးအတွက်သင်တို့ကဲ့သို့တံခါး!
အခုချက်ချင်း၊ကျနော်တို့စာသားအတိုင်းသွားပေးမှဝင်ရောက်ခွ Tranny လိင်ဂိမ်းများ:သင်ပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအကောင့်အတွက်သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဖြစ်စေ! ဤအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ချင်မှဆင်းသွားလမ်းပေးခြင်း၏လူများအခမဲ့သုံးစွဲခွင့်အမိန့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ငါတို့ခြေချောင်းအပေါ်။ မြင်၊ထိုပြဿနာကိုအတူခေါင်းစဉ်နဲ့တူ Cyberpunk ၂၀၇၇ ကဝယ်ယူပြီးပြီပြီး၊ဒါကြောင့်ဖွင့်ကြောင်း–အဘယ်သူမျှမလိုအပ်လျင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ဝန်အသစ်အကြောင်းအခြားသူသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှ။ ဒါဟာယူတာပဲ၊ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာရောက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။, သို့သော်၊ကျွန်တော်သတိပြုမိသောခေါင်းစဉ်ခဲ့ကြရသောပတ်လည်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်၊ကဲ့သို့:အသွား၊အဖွဲ့ချုပ်၏ဒဏ္ဍာရီနှင့်လမ်းကြောင်းနှင်ဒဏ်အားလုံးကိုရွေးချယ်ပေးခြင်းအတွက်သူတို့ရဲ့ဂိမ်းအကွာအခမဲ့။ ဒါဟာတကယ်အကောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊သူတို့ကမရကြဘူး။ တော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့အယူအဆ၊ငါတို့မူကားကြိုက်ကပ္ျ၏မက်–ရွင္စ၊ကလေး! ကြည့်ရှု၊ငါကြောင်းသိမထွက်ရှိပါတယ်လူတိုင်းဂရုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်သင်ရုံကစားချင် shemale ညမ်းဂိမ်းများ၊ဒါပေမယ့်အချိန်တွင်ဘယ်လိုရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊အဆင်ပြေ? ဒဏ်ငွေ! ငါအကြောင်းပြောဆိုပါလိမ့်မယ်အဆိုပါဂိမ်းများအစားနောက်ကွယ်ကသီအိုရီ။ စိတ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ပျင်းစရာကြီး၊သို့မဟုတ်သမျှ။
ဂိမ်းကစားမှာ Tranny လိင်ဂိမ်းများ
ထိုအချိန်ကအရေးအသား၏ဤစာကြည့်တိုက်၏ဂိမ်းများရှိသည်စုစုပေါင်း ၁၅:မဆိုး၊အယ်? သေချာတာပေါ့၊အသွားအပြိုင်ရေနွေးငွေ့၊ဒါပေမယ့်မှတ်မိသေးကြောင်းဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများပတ်ပတ်လည်အခြေ transsexuals၊shemales နှင့်ထောင်ချောက်။ သင်ရှာဖွေရန်ရုန်းကန်မည်သည့်ဦးတည်နိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအရေအတွက်–ကြကုန်အံ့တယောက်တည်းအရည်အသွေး! ကျွန်တော်လည်းလိုချင်ကြောင်းအလေးအနက်တိုင်းတစ်ခုတည်းခေါင်းစဉ်ကိုသင်ရှာဒီမှာဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%အတွက်ထုတ်လုပ်သော-အိမ်ကယို။ အမွတ္တိယ-ပါတီ၊အမွတ္လိုင်စင်–ဒီချုပ်၊သီးသန့်သန္ဓေညမ်းဂိမ်းကစားသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှာဖွေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။, ကျနော်တို့အချက်ကိုကိုချစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအကောင်းရှိပါတယ်၊လူများလာပြန်နေ့တိုင်းအမိန့်၌သူတို့ကိုကစားရန်–အရာတစ်ခုခုကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းသင်မယ်လုပ်နေတာနဲ့တူခံစားရ! တူအဲဒီ ၁၅ ဂိမ်း၊သင်လည်းရလိမ့်မယ်တစ်ဦးအပြည့်အစု၏အလိင်ဗီဒီယိုများကျွန်ုပ်တို့၏ပြွန်ဧရိယာ၊နောက်တဖန်ကျိန်ဖို့များ၏လှုပ်ရှားမှုများအပူ shemales။ ရှိပါတယ် ၃၊၀၀၀ တင်ထားသည်များအဲဒီမှာအတွက်ယခုရရှိနိုင် ၇၂၀ မှာအနည်းဆုံး၊အများဆုံးမှာ ၁၀၈၀ နှင့်ပင်အချို့အတွက်အပြည့်အဝ ၄ ဋ! ကျနော်တို့လှုပ်ရှားလျင်အမြန်ရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံး tranny အတွေ့အကြုံမှလူသိများယောက်ျား:အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းကြွင်းသောအရာတို့ထက်နှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နည်းလမ်း!
နှစ်ဦးစလုံးအဆိုပါဂိမ်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီမှာကယ့်ကိုကြီးသော:ဒါဟာခက်ခဲသည့်အရာကဆုံးဖြတ်သင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်! အတွက်ဂရပ်ဖစ်ဌာနဖြစ်သည်၊ကျနော်တို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏၃ တဲ့သူကလူအလွန်အမင်းအထူးပြုအားကစားပြိုင်ပွဲ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စိတ်အားထက်သန်ပရိသတ်အ shemale အမျိုးအစား။ သူတို့အပေါ်အလုပ်လုပ် ၃D ဖော်ရန်၊ဒါကြောင့်အပေါ်တစ်ဦးတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအဆုံးရလဒ်များကိုများမှာအထူးပြောဖို့အလွန်အနည်းဆုံး! ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မယ်၊ကျနော်တို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုလည်းဆောင်ခဲ့အပေါ်အနည်းငယ်ပိုပြီးအနုပညာရှင်များထည့်ရန်အမျိုးမျိုးနှင့်အရသာမှဖြန့်ချိသည္။ အခုအတွက်ဂိမ်းဌာန–ဒါကကျွန်မအတွက်လာ!, ကျွန်မအလုပ်လုပ်ဂိမ်းအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊သူတို့ကောင်းပါတယ်! ဒါကြောင့်ကိုယ့်တဦးတည်းစတိုင်ဂိမ်းကောင်းမယ့်မဟာဗျူဟာဖြန့်ချိ၊RPGs၊ချိန်းတွေ့ simulators နှင့်ပင်အချို့ခံုး-စတိုင်ကြောင်းဂိမ်းများများမှာပြီးပြည့်စုံသောရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်တစ်ဦးအမြန်အကျိုး။ ငါအနီ၊ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်အံ့သြလျှင်ငါ၌တက်အဆုံးသတ်သည်၏အရည်အသွေးအလုပ်ပြုသောအမှုဖွင့်။ ဒါဟာမမျှသာလွန်ဖန်တီးရန်ကြယ်ပြာဂိမ်းများ၊မှန်သော? အခါအထူးသဖြင့်သူတို့ပတ်ပတ်လည်အခြေ transsexuals!
အဆင္ေ shemale စုံလင်
လျှင်သင်ပြီးသားရှိသည်မဟုတ်သေးတယ်၊ငါသည်ယုံကြည်သော Tranny လိင်ဂိမ်းများသည်နံပါတ်တစ်ခရီးအတွက်အွန်လိုင်း shemale ဂိမ်းပရိသတ်များအဖို့မိမိတို့လက်ရရန်အထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းပြည့်စုံ၏နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်။ ရှိပါတယ်နေစဉ်၊အနည်းငယ်သောအရပ်တို့ကိုရစေခြင်းငှါ၊သင်တို့ကိုအနီးကပ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်အဆာ၊အဘယ်သူမျှမခရီးအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်–သားပဲ။ ကျနော်တို့သုတေသနပြုယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ငရဲ၊တစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းပြချက်ဒီချာဆိုတဲ့ပထမနေရာအတွက်ကြောင့်ယူဒီနယ်ပယ်လာမည့်အဆင့်အထိ!, ဖူးဖူးကစိတ်ကူးအချိန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာငါနှင့်အတူအနာဂတ်အကျနော်တို့စီစဉ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်၊သင်ခံစားရလျှင်သင်တူတစ်လျှောက်မှာလာမယ့်ကိုမြင်လျှင်နှင့်ကိုယ်အဘို့အမှုအရာသွားကြသည်ကိုဘယ်လိုသွားဖို့၊အမေ့ကိုဖန်တီးရန်အကောင့်တစ်ခုအတွင်းအပြင်! အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကြာအားလုံး၏၆၀ စက္ကန့်၊တဖန်:ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့။ သင်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှမရှိသည်အခါသင်ပူးပေါင်း Tranny လိင်ဂိမ်းများ!
ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? ကိုနှိပ်ပါပူးပေါင်းခလုတ်ကိုအပေါ်ကြောင်းအီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ရကုန်သင်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်၏ကမ္ဘာ tranny ဂိမ်းကစား၏အကြိုက်သောသင်သာသင်၏အိပ်မက်မက်!